China Potassium Persulphate rụpụta na Factory | FIZA
Potassium persulphate bụ ihe na-acha ọcha dị ọcha, uzuzu na-esi ísì ụtọ, njupụta nke 2.477. Enwere ike ịgbarịa ihe dị ka 100 Celsius C ma gbazee na mmiri adịghị na ethanol, ma nwee ọsịsị siri ike. A na-eji ya iji mepụta detonator, bleacher, oxidant na initiator maka Polymerization. Ọ nwere uru dị iche iche nke ịbụ ihe na-abụghị hygroscopic nke inwe nkwụsi ike nchekwa dị mma na ọnọdụ okpomọkụ yana ịdị mfe ma dịkwa mma ijikwa.
Oxygen na-arụ ọrụ
Chloride na Chlorate (dika Cl)
1. Polymerization: Initiator maka emulsion ma ọ bụ ihe ngwọta Polymerization nke acrylic monomers, vinyl acetate, vinyl chloride wdg na maka emulsion co-polymerization nke styrene, acrylonitrile, butadiene wdg.
2. Ọgwụ ọgwụgwọ: Ọgwụgwọ igwe (dịka imepụta semiconductors, ihicha na etching nke sekit na-ebipụta), ịmalite ọla kọpa na aluminom.
3. Ngosiputa Ngwa: Akụrụngwa dị mkpa nke ịcha ọcha.
4. Akwụkwọ: mgbanwe starch, repulping nke mmiri - ike akwụkwọ.
5. Textile: Desizing gị n'ụlọnga na ịcha ọcha activator - karịsịa maka oyi ịcha ọcha.
①25Kg plastic kpara akpa
② 25Kg Pee akpa
Nke gara aga: Sodium Persulphate
Osote: Ọkụ Ọkụ Crucible